Manaisotra ny Rakotra Manarona ny Sivana ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Manaisotra ny Rakotra Manarona ny Sivana ao Shina
Voadika ny 25 Desambra 2013 22:59 GMT
I Shina no manana fandrindrana fanivanana voalalina indrindra eran-tany, ary mety ho tena sarotra ho an'ireo avy any ivelany ny hahatakatra ny fomba fiasany sy ny zavatra tena voasivana.
Maro ireo tetikasa natokana hanazavana io trangan-javatra io amin'ny alalan'ny fandalinana ny Sina Weibo, sehatry ny media sosialy manan-daza indrindra ao Shina miaraka amin'ireo mpampiasa voatahiry maherin'ny 500 tapitrisa sy mpampiasa tsy ankiato miisa 54 tapitrisa, araka ireo tahan'isa nivoaka ny Jona 2013. Manana fizarana atao hoe “Minisitry ny Marina” ny Digital Times ao Shina izay manangona ireo torolalàna avy amin'ireo manam-pahefana misahana ny fampielezan-kevitra anatin'ireo fitaovan'ny media sy ireo teny voasivana anatin'ny fikarohan'ny Sina Weibo.
Inona no sivanin'i Shina ao anaty aterineto? Sary avy amin'ny flickr @Social Media Max (CC: NC-SA-AT)
Manara-maso ireo bilaogy bitik'ireo mpampiasa ny Weibo maherin'ny 10.000 na ireo mpanaraka hafa ny WeiboScope amin'ny alalan'ny Anjerimanontolon'ny Fandalinana ny Fanaovan-gazety sy ny Media ao Hong Kong, ary mamorona rakitra ho an'ireo izay voafafa. Nanokatra ny rakiny ny WeiboScope ho an'ireo hafa mba hampivoarany ny tetikasany manokana momba ny fanaraha-maso ny fanivanana, tahaka ny Free Weibo, izay mamorona rakitra ho an'ireo bilaogy bitika voasivana ary mahatonga azy ireo ho azo karohina. Vao haingana izay dia namolavola rindrambaiko hoanà finday ny Free Weibo ho an'ireo mpampiasa avo ao amin'ny Tanibe Shina mba handinihana ireo izay voasivana.
Ny ezaka farany hanaraha-maso ny fanivanan'ny Sina Weibo dia ny tetikasa Memory Hole an'ny ProPublica. Mampiasa ny rindrambaiko hanaraha-maso ny vondronà kaonty 100 an'ireo mpampiasa Weibo mba hitily ireo sary voasivana sy hijery ireo votoaty voasivana. Araka ny mety heverin'ny tsirairay, ny lahateny ara-politika no sokajy lehibe indrindra ahitana ireo sary voasivana. Mandrakotra ny zava-drehetra avy amin'ny tsikera ny governemanta Sinoa sy ireo fangatahana ho an'ny fitsrana ara-piarahamonina ka hatramin'ireo fandraisana hafa ireo zava-nisy ara-Tantara, ny dikan'ilay “lahateny ara-politika”.
Raha ny marina, ireo sokajin-tsary hafa voasivana izay hita ao anatin'ny tetikasa Memory Hole, tahaka ireo Mpanohitra sy Olo-malaza, ireo Hetsi-panoherana, ireo Fanafintohinana & Kolikoly, ny Fanivanana (izany hoe ny votoaty mamoaka ny zavatra voasivana), ary ny Sary itatra & Hatsikana, dia raisina ho sakana ho an'ny maha-ara-dalàna ny Antoko Kaominista Sinoa, olana lehibe ao ambadiky ny fangatahana farany nataon'ny antoko ho amin'ny ady ara-potokevitra ao anaty aterineto.
Ireo tetikasa fikarohana rehetra etsy ambony ireo dia manome topimaso mamirapiratra ny fanivanaa misy ao amin'ny firenena, fa ny rakitra dia saika avy amin'ireo lehibe ara-kevitra ao anaty aterineto avokoa — ireo mpampiasa ny media sosialy manam-pahefana izay mametraka ny fandaharam-potoana sy mitarika ny adihevitra anaty aterineto — ary kely ny fampahalalana mikasika ny fomba hiantefan'ny fanivanana any amin'ireo hetsika fototra. Ampahany goavana amin'ny adihevitra ao anaty aterineto ihany koa ny fanaovan-gazety mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina mikasika ireo fotokevitra mafampana tahaka ny fanerena ny fananan-tany, ny fahalotoan'ny tontolo iainana, ireo loza voajanahary, ireo fifandirana eo amin'ny mpivarotra an-dalambe sy ny mpitandro filaminana, ary ireo mpanohitra vitsy ireo manam-pahefana ao an-toerana. Ny votoaty tahaka izany, matetika zarain'ireo mpampiasa ny media sosialy izay tsy tena mavitrika sady tsy dia manana mpanaraka firy, dia mety tsy hisarika ny sain'ireo mpitari-kevitra eo amin'ny seha-pirenena, saingy manam-pahefana eo amin'ny seha-pirenena ny fampahalalana ary mifandray mivantana kokoa amin'ny hetsika ara-tsosialy mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina.
Koa satria mifantoka kokoa amin'ireo zava-mitranga eo amin'ny firenena izay manembatsembana ny maha-ara-dalàna ny antoko ireo mpanivana ny aterineto Sinoa, dia mirona kokoa amin'ny fanivanana ireo olo-malaza izay afaka mampivangongo ny adihevi-bahoaka eraky ny firenena, sahala amin'ireo fotokevitra mafana izay efa resahina ampahibemaso eraky ny firenena. Voasoritra ho fizotranà “adihevitra nahazoan-dàlana” ny adihevitra ara-politika anatin'ny tontolon'ny olom-pirenena nasionaly, izay hiasàn'ireo mpitarika hevi-bahoaka ho fantsona lehibe eo amin'ny hevi-bahoaka ho an'ny governemanta ivony ka afaka manindry ireo manam-pahefana mba hiova.
Na izany aza, ankoatra ny tontolon'ny vahoaka eraky ny firenena, nampivoatra ny fivoaran'ireo tontolom-bahoaka mifottra amin'ny faritra, ny vondrom-piarahamonina , ny maha-izy azy ary ny olana ihany koa ny media sosialy. Misy mpitoraka bilaogy bitika marobe tsy voamarina na vitsy ireo izay mpanaraka mavitrika amin'ny famoahana ireo vaovaom-pirenena sy ireo tatitry ny vavolombelona tamin'ireo zava-nitranga ao amin'ny Weibo, ary toa tsy dia misy risika be loatra ny amin'ny mety hisian'ny fanivanana izy ireo mandra-piparitaky ny lahatsoratra izy ireo. Ankoatra izay, mirotsaka anatinà karazana ady maivana ao anaty aterineto ireo mpampiasa sasany, mba hanaparitahana ny vaovaony, amin'ny alalan'ny fampiasan'izy ireo kaonty maro tsy voamarina anatin'ireo sehatry ny fitoraham-bialogy bitika samy hafa. Koa satria ny ankamaroan'ireo tetikasa fanaraha-maso ny fanivanana dia mifantoka amin'ireo mpampiasa voamarina sy manam-pahefana, dia mbola tsy voaboraka ny fomba iadian'ireo mpanivana amin'ireo loharano fototra mizarazara.
Miaraka amin'ny fanatsaran'ny Antoko Kaominista Sinoa ny paika fanivanany miainga amin'ny fanivanana sy ny famafana ny votoaty aorian'ny famoahana ka mankany amin'ny fanivanan-tena amin'ny alalan'ny fampidirana lalàna vaovao sy fitsipika, dia nisy fifindra-moninà mpampiasa aterineto maro avy ao amin'ny Weibo mankany amin'ireo sehatra voatokana kokoa tahaka ny WeChat. Raha toa ka manana sehatra ho an'ny rehetra ihany koa ny WeChat, matetika dia anatinà faribolana voafetra no anaovana ireo adihevitra mafana kokoa, mba hisorohana ireo fanalam-baraka sy fanafihana anaty aterineto.
Na eo aza ny hatsarany, maro ireo Sinoa mpampiasa finday no mahafantatra fa misy teknolojia fanaraha-maso ao anatin'ny WeChat, ary mety afaka hiditra anatin'ny fitoeran'ny resany, lisitr'ireo mpifanerasera aminy, ireo hafatra, antso, ary toera ara-jeografia ireo manam-pahefana Sinoa. Io rindrambaiko io, miaraka amin'ny fametrahana tsiambarantelo voafetra eo amin'ny resaky ny vondron'olona, dia manampy ireo mampiasa azy hanangana vondrom-piarahamonina arakaraky ny haavon'ny fifampitokisana, ary mbola an-dàlam-pikarohana ny fomba hanovan'ny WeChat ny tontolom-bahoaka anaty aterineto ao Shina isika.